कठै ! श्रीमान विदेशबाट आउने भनेपछि छोरा समेत लिएर ना ठोसँग फ रार भइन् श्रीमती (भिडियो हेर्नुस्) -
Home News कठै ! श्रीमान विदेशबाट आउने भनेपछि छोरा समेत लिएर ना ठोसँग फ...
कठै ! श्रीमान विदेशबाट आउने भनेपछि छोरा समेत लिएर ना ठोसँग फ रार भइन् श्रीमती (भिडियो हेर्नुस्)
मोरङ जिल्लाको केराबारी वडा नम्बर ३ घर भइ बसोबास गर्दै आएका किरण मगर वैदेशिक रोजगारको क्रममा कतारमा गएका थिए । परिवारको लागि भनेर दु’ख गरिरहेका उनी हालसालै नेपाल फर्किएका हुन तर नेपाल आउनासाथ उनले एकदमै दु’खको खबर सुन्नुपरेको छ । उनी नेपाल फर्किने सुन्नासाथ उनकि श्रीमती भने छोरिसहित अर्कै पुरुषसग भा’गे’की छिन ।
पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरु सामान्य बन्दै गएका छ्न । श्रीमान बिदेशमा दु’ख गर्ने यता श्रीमती भने अर्कै सग च’क्क’र चलाउने । एम मगर नाम गरेकी उनकी श्रीमती उनी माइत गएकोमा उतैबाट फ’रा’र भएकिछिन । यसरी श्रीमती भा’गेपछी आज किरण सहयोगको अपेक्षामा मिडियासामु आएका छ्न ।श्रीमान काठमाडौं झ’र्ने खबर सुन्नासाथ उनी भा’गे’को कुरा उनले बताए ।
बिगत १ महिनादेखी श्रीमती सम्पर्कबिहिन रहेको कुरा उनले मिडियामार्फत जानकारी गराए । एकैदिनमा ५० देखि ६० पटकसम्म मेसेन्जरमा कुरा हुदो रहेछ उनकी श्रीमतीको उक्त पुरुषसग । उनको श्रीमतीको फेसबुक आइ डि समेत उक्त पुरुषले नै चलाउने हुनाले उनले उनिहरुबिच सम्बन्ध रहेको कुरा थाहा पाएको उनले खुलाए ।
श्रीमानसग एकछिन कुरा गरेपछी चार्ज सकियो भनेर अनेक ब’हा’ना गर्ने गरेको कुरा पनि उनले खुलाए । उनिभने आफ्नी श्रीमतिको कुराहरु आखा चि’म्लेर बिश्वास गर्ने गरेको बताउछ्न उनी तर उनले गरेको बिश्वासको ब’द’लामा पाए त उनले सिर्फ धो’का । ८ बर्षकि उनकी छोरी पनि लिएर गएका रहेछ्न उनी । उक्त केटाले भने फोन गरेर उनको श्रीमती लगेको स्विकार गरिसकेका रहेछ्न ।
श्रीमती र छोरीको लागि भनेर दु’ख गरे आज उनिहरु नै आज साथमा छैनन भन्दै दु’ख मान्छ्न उनी । यदि उसले हेररहेको छ भने मेरो छोरी फिर्ता दिओस र डि’भो’र्स दिओस भने उनले । श्रीमतीलाई भने माया मा’रि’स’के उनले । श्रीमतीको माइतीपक्षले भने आएपछी खबर गरिदिउला भनेका रहेछ्न ।
Previous articleदुई महिना अघिमात्र अमेरिका पुगेकी बर्खा कहिले नेपाल नफर्किने गरी सदाको लागि संसार छाडिन् !
Next articleबुबाआमाले खेती किसानी गरेर पढाएकी छोरी मनिषा बीबीएसमा नेपाल टप भईन !